China Beautiful Design Ikhaya Ingadi Sebenzisa PC Greenhouse ifektri abakhiqizi | Bonai
1. Phendula imibuzo yakho ku-inthanethi amahora angama-24 ngesikhathi esifushane kakhulu
2. Abasebenzi abanolwazi ukuphendula yonke imibuzo yakho
1. Sizokwazisa ngobukhulu obuthile nemibala oyifunayo.
2. Singakhiqiza amabhodi e-polycarbonate, futhi sizimisele ukukunikeza iziphakamiso ngolwazi lwakho.
(1) I-Flame-retardant: I-standard ejwayelekile kazwelonke ye-GB50222-95 iqinisekisa ukuthi ibhodi le-PC libanga lokuqala eligcina ilangabi, okungukuthi, ibanga B1. Indawo yokushisa ibhodi le-PC ingu-580 degrees Celsius, futhi izokucima ngemuva kokushiya umlilo. Ngeke ikhiqize igesi enobuthi ngesikhathi somlilo futhi ngeke ikhuthaze ukusabalala komlilo.
(2) Ukuzivumelanisa nezimo: Ukugoba okubandayo kungasetshenziswa esakhiweni ngokwakhiwa komdwebo, futhi kungafakwa ku-arch, ophahleni oluyisiyingi nefasitela. Ububanzi obuncane bokugoba buyizikhathi eziyi-175 ukushuba kwepuleti elamukelwe, futhi ukugoba okushisayo nakho kungenzeka.
(3) Ukufakwa komsindo: Ibhodi le-PC linomphumela wokucaca womsindo osobala, futhi unokufakwa komsindo okungcono kunengilazi nebhodi le-acrylic lokuqina okufanayo. Ngaphansi kobukhulu obufanayo, ukufakwa komsindo kwebhodi le-PC kungu-3-4DB ngaphezulu kunalokho kwengilazi. Emhlabeni jikelele, yizinto zokuzikhethela zemikhawulo yomsindo onguthelawayeka.
(4) Ukonga amandla: hlala upholile ehlobo bese ufudumele ebusika. I-PC board ine-conductivity ephansi yokushisa (inani le-K) kunengilazi ejwayelekile namanye ama-plastiki, futhi umphumela wayo wokushisa ukushisa ungama-7% -25% ngaphezulu kunalokhu kwengilazi efanayo. Ukushisa kufinyelela kuma-49%. Ngaleyo ndlela, ukulahleka kokushisa kuncishiswe kakhulu, futhi kusetshenziswa ezakhiweni ezinemishini yokushisa futhi kuyinto enobungani bemvelo.
(5) Ukuzivumelanisa nezimo kokushisa: Ibhodi le-PC ngeke libande kakhulu ku -100 ℃, futhi ngeke lithanjiswe ku-135 ℃, futhi imishini yalo nezakhiwo zemishini ngeke zishintshe kakhulu ezindaweni ezinzima.
Langaphambilini Ishidi le-PC elenziwe ngokwezifiso eliphakeme le-Polycarbonate PC
Olandelayo: Izinto zokwakha zePolycarbonate Plastic / Hollow Sheet